ကျွန်တော် ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်လက်ခံရသလဲ ? (Kareem Abdul-Jabbar) - News @ M-Media
in ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ — April 28, 2015
ကျွန်တော် ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်လက်ခံရသလဲ ? (Kareem Abdul-Jabbar- အမေရိကန် နာမည်ကြီး ဘတ်စကက်ဘော ကစားသမား)
အမေရိကားမှာ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းက မလွယ်လှပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုက နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှုလို့ ဆိုရပါမယ်။
ကျွန်တော့်ကို လျူ အလ်စင်းဒေါ Lew Alcindor အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ကရီးမ် အဗ်ဒုလ် ဂျဗ္ဗာ့ရ် Kareem Abdul-Jabbar ဖြစ်နေပါပြီ။
လျူ ဘ၀ကနေ ကရီးမ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာ Sean Combs ကနေ Puff Daddy ၊ အဲ့ဒီကနေ Diddy ၊ နောက်တစ်ဆင့် P. Diddy ဖြစ်သွားသလိုမျိုး နာမည်ကြီးအောင် အမည်နာမမျှသာ တံဆိပ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးသား၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်များရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းချက်ပါ။ အမေရိကလူဖြူတွေ မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဟာ လျူအဖြစ်နဲ့ သူလိုကိုယ်လို နေထိုင်ခဲ့တာပေါ့။ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အာဖရိကန်သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ကိုယ်ထင်ပြပြီး အဗ်ဒုလ် ဂျဗ္ဗာ့ရ် အဖြစ် ရပ်တည်နေပါပြီ။
လူအများစုအတွက် ဘာသာတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းခြင်းဆိုတာ စေ့စပ်သေချာစွာသိမြင်နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ သီးခြားကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အသင်က လူသိများကျော်ကြားသူဖြစ်နေရင်တော့ အဲ့ဒီကိစ္စဟာ လူတွေရဲ့မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်ခံရပြီး အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသင်ဟာ ထိတွေ့မှုနည်းပါးတဲ့ သို့မဟုတ် လူသိနည်းတဲ့ ဘာသာတရားတစ်ရပ်ကို ကူးပြောင်းမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အမျိုးသားရေးနဲ့ စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုင်ရာ ဝေဖန်ချက်တွေကို ဖိတ်ခေါ်မှု ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ကျွန်တော် မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်လွန်နေချိန်မှာပင်လျှင် အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုခံကာကွယ်နေရဆဲပါ။
UCLA မှာ မောင်သစ်လွင်ဖြစ်စဉ်ကပဲ အစ္စလာမ်နဲ့ ကျွန်တော် ထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းသိပြည်သိ ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားဆိုတဲ့အဆင့် ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်ငြား ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို သီးခြားထုတ်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လူသိများကျော်ကြားမှုက ကျွန်တော့်ကို ပူပင်မှုတွေများစေတယ်၊ သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ နုပျိုငယ်ရွယ်ဆဲဖြစ်တော့ မီးမောင်းရှေ့မှာ ဘာကြောင့်ရှက်နေသလဲလို့ သေသေချာချာ မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်လာပါတော့တယ်။
လူတွေ အမွှမ်းတင်ဂုဏ်ပြုနေသူဟာ စင်စစ်အားဖြင့် ငါ ဆိုတဲ့သူ မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်က ကျွန်တော့်စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှုရဲ့အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာတော့မယ့် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ယောက်သာမက နိုင်ငံတွင်းက အကောင်းဆုံးကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်းတစ်ခုအတွက် ကစားရင်း ပညာရေးရှေ့ဆက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေရသူပါ။ ၁၉၆၆ နဲ့ ၆၇ ခုနှစ်မှာပေါ့။ ကျားသစ်နက်ပါတီကိုတည်ထောင်ပြီး မစ္စစ္စပီမြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ချီတက်လာရာမှာ James Meredith ဟာ ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ Thurgood Marshall ဟာ ပထမဆုံး အာဖရိကန်နွယ်ဖွားအမေရိကန် ဗဟိုတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတယ်။ လူမည်းဖြစ်နေခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် ဒက်ထရွိုက်မှာ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီး ၄၃ ဦးသေဆုံးတယ်။ ၁၁၈၉ ဦး ဒဏ်ရာရတယ်။ အိမ်ခြေ ၂၀၀၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။ လူတကာ ချီးကျူးအားပေးနေကြတဲ့ ကျွန်တော် Lew Alcindor ဆိုတာ သူတို့ယူဆထားတဲ့သူအစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေးတန်းတူဆက်ဆံမှုကို ပုံဆောင်ဖော်ကျူးပေးနေတဲ့ ရွှေမင်းသားအဖြစ် သူတို့က လိုချင်နေကြတာပါ။ ဘယ်လိုလူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အလွှာ – ဘယ်လိုကျောထောက်နောက်ခံရှိသူဖြစ်နေပါစေ အမေရိကန်အိပ်မက်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာလူငယ်လေးပေါ့ဗျာ။ သူတို့အဖို့ ကျွန်တော်က “လူမျိုးကြီးဝါဒမဲ့ သက်ရှိသာဓက” တစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
အရပ် ၇ပေ ၂လက္မရှိပြီး အားကစားထူးချွန်တာကြောင့် ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပါ။ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ ကစားကွင်းထဲရောက်လာတာမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော် သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အထက်လူကြီးတွေ ကျေနပ်အောင်ကြိုးစားရေး အတွက် ပျိုးထောင်မှုအကြား ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖခင်က စည်းကမ်းသားကောင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်က စည်းမျဉ်းတွေပိုတင်းကြပ်တဲ့ ဓမ္မဆရာတွေ၊ သီလရင်တွေနဲ့အတူ ကက်သလစ်ကျောင်းကို တက်ခဲ့ရသူပါ။ စည်းကမ်းကလနားပိုများတဲ့ နည်းပြတွေအတွက် ကျွန်တော် ဘတ်စကက်ဘော ကစားခဲ့သူပါ။ အဲ့ဒီနေရာတွေ ပြန်လှန်ပြောဆို တင်ပြခွင့်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
၁၉၆၀ ခုနှစ်များအတွင်း ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်လို့ စံပြလူမည်းအမျိုးသားတွေကို များများစားစား မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာကို သူရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်သတ္တိနဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေအတွက် ကျွန်တော် လေးစားအားကျတယ်။ လူများစုလူဖြူတွေရဲ့အသိတရားမှာ လူမည်းတွေက လူကောင်းသူမွန်တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ စွဲမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ လူမည်းတွေဟာ တမင်နှိမ့်ချဆက်ဆံရမယ့်လူမျိုးစုတွေ၊ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရဖို့ လူဖြူတွေဆီ လက်ဖြန့်ရမယ့်လူစားတွေ သို့မဟုတ် လူဖြူတွေရဲ့အိမ်၊ လုပ်ငန်းနဲ့ သမီးတွေကို ဖယ်ထုတ်ချင်နေတဲ့ လူမျိုးရေးပြဿနာရှာသူတွေ စသဖြင့် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ထင်မှတ်ထားကြတယ်။ လူဖြူတွေက လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ အားကစားမှာဖြစ်စေ သူတို့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေအပေါ် သစ္စာစောင့်သိနိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရုပ်ပြတွေကိုသာ လူကောင်းသူမွန်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြတယ်လေ။ ဒီအရှိတရားက တစ်ခုခုကြောင့် မှားယွင်းနေတာ၊ ဒါကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုတာ ကျွန်တော် သိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် ဘာတွေအကျိုးသက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိပါဘူး။
ကျွန်တော်ဟာ ချာ့ခ်ျကျောင်းတွေကို မီးလောင်တိုက်တွင်းတော့မလိုလို အမေရိကန်အလံကို အစိပ်စိပ်အမြွာမြွာ ဆွဲဆုတ်ပစ်တော့မလိုလို ကျွန်တော့်ပရိသတ်အချို့က ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် တစ်ဖက်စွဲအမြင်ထားရှိခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အစောပိုင်းလူသစ်တန်းနိုးကြားမှုကို “Malcolm X ကိုယ်တိုင်းရေးအတ္ထုပ္ပတ္ထိ” စာအုပ် ဖတ်ရှုရာမှ အများအပြားရရှိခဲ့တယ်။ တကယ့်အကျဉ်းထောင်ထဲ ခြေမချမီ မိမိဟာ လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒရဲ့ဓားစာခံအဖြစ် ရေရှည်ပိတ်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း နားလည်သွားပုံကို ဖော်ပြတဲ့ မဲလ်ကွန်မ်အကြောင်းက ကျွန်တော့်ကို ညှို့ယူသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ခံစားနေရတာနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နေတာကိုးဗျ။ ပုံဖော်ချက်အရိပ်တစ်ခုအောက်မှာ ကျွန်တော် အကျဉ်းကျနေရတယ်လေ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မဲလ်ကွန်မ်က သူ့မိဘရဲ့ပျိုးထောင်မှုဖြစ်တဲ့ နှစ်ခြင်းဘာသာကို သူ့ထံက ဖယ်ခွာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အစ္စလာမ်ကို လေ့လာတယ်။ သူ့အဖို့ ခရစ်ယာန်ဝါဒဟာ လူမည်းတွေကိုကျွန်ပြုရေး လူဖြူယဉ်ကျေးမှုရဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခု၊ ဒါ့အပြင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြား လူမျိုးကြီးဝါဒကျားကန်ချက် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့မိသားစုကို အစွန်းရောက် ခရစ်ယာန် Ku Klux Klan ကေသုံးလုံးဂိုဏ်းသားတွေက တိုက်ခိုက်ပြီး သူ့အိမ်ကိုလည်း မီးရှို့ခဲ့ကြတယ်။
သနားစဖွယ်ရာဇ၀တ်သားကနေ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် မဲလ်ကွန်မ် အိတ်စ်ရဲ့ ပုံလွှာအပြောင်းအလဲက ကျွန်တော့်ရဲ့ကြီးပြင်းမှုအပေါ် စေ့စေ့စပ်စပ် သုံးသပ်စေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လူမျိုးရေးအမှတ်သညာအကြောင်းကိုလည်း နက်ရှိုင်းစွာ စဉ်းစားဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်က သူ့ကိုသူ အမှန်အတိုင်းတွေ့မြင်လာစေခဲ့ပြီး၊ လူဖြူလူမည်းနှစ်ရပ်စလုံးရဲ့သူစိမ်းဆန်မှုကို ရင်ဆိုင်ရေးအတွက်သာမက တန်းတူလူမှုဆက်ဆံရေး တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ခွန်အားတွေ ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်ကို စတင် လေ့လာပါတော့တယ်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ကျွန်တော့်ကို နာမ်ပိုင်းပြည့်ဝမှုလမ်းကြောင်းတစ်ရပ်ဆီ ဦးလည်မသုန် ချမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချောမွေ့တဲ့ ပန်းခင်းလမ်းတစ်ခု မဟုတ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ချွတ်ချော်မှုတွေ မနည်းပါဘူး။ မိမိယုံကြည်ချက်တွေ ထက်ရှလာရေးနဲ့ စိန်ခေါ်ရေး အလို့ငှာ တွေ့ရှိချက်အမှားအယွင်းတွေ၊ အတားအဆီးအနှောင့်အယှက်တွေ၊ လမ်းကြောင်းချော်မှုတွေကို တပုံတပင် ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ “ရင်းနှီးပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ်ကို အရူးလုပ်ဖို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရသူလို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်” လို့ မဲလ်ကွန်မ် ကပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် …… ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့တယ်လေ။
အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်ဟာ စည်းကမ်းရဲ့ကျွန်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် စာသင်ဆရာ၊ ဓမ္မဆရာ၊ နည်းပြဆရာဆိုတဲ့ စည်းကမ်းထုတ်သူတွေအပေါ်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်က အများနဲ့မတူတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတိုင်း အစ္စလာမ်အကြောင်း သိချင်စိတ်ပြင်းပြလာတဲ့အချိန်မှာ Hammas Abdul-Khaalis ကို ဆရာတင်ဖို့ ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ Milwaukee Bucks မှာ ကစားနေစဉ်တစ်လျှောက် ဟမ္မာ့စ်ရဲ့ အစ္စလာမ့်တင်ပြချက်တွေထဲ စီးမျောခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကျွန်တော့်အသက် ၂၄ နှစ်၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်လက်ခံလိုက်ပြီး ကရီးမ် အဗ်ဒုလ် ဂျဗ္ဗာ့ရ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကရီးမ် အဗ်ဒုလ် ဂျဗ္ဗာ့ရ် ဆိုတာ “အနန္တစွမ်းအားရှင်ရဲ့နာခံကျွန် ထွဋ်မြတ်သူ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို မကြာခဏမေးမြန်းကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မနီးစပ်လှတဲ့ သာသနာ၊ လူတွေ အသံထွက်ပြောဆိုဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ အမည်နာမကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ရတာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်အလံကိုဆုတ်ဖြဲပြီး ချာ့ခ်ျကျောင်းတွေကို မီးရှို့တော့မလားဆိုပြီး ကျွန်တော့်ပရိသတ်အချို့က တစ်ဖက်သတ်ဆန်ဆန် အမြင်ရှိကြတယ်။ အမှန်တကယ်ပဲ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မနီးစပ်တဲ့ သာသနာကို အာခံပယ်လှန်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့အာဖရိကန် လူမည်းအမွေအနှစ်တစ်ရပ်ကို လက်ခံလိုက်တာလေ။ (အာဖရိကတိုက်ကနေ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တွေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်)။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အစ္စလာမ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Nation of Islam ထဲ ကျွန်တော် ၀င်လိုက်ပြီလို့ ပရိသတ်တွေက ထင်မြင်ကြတယ်။ Nation of Islam ရဲ့ခေါင်းဆောင် Malcolm X ရဲ့လွှမ်းမိုးမှု ကျွန်တော့်အပေါ် ရှိနေလင့်ကစား အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲ မ၀င်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးထက် နာမ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာ ကျွန်တော် အာရုံစိုက်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးက သူ့ကို ပြန်လုပ်ကြံမှုမတိုင်မီ အဲ့ဒီအုပ်စုကို မဲလ်ကွန်မ် စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကူးပြောင်းသက်ဝင်မှုအပေါ် မိဘတွေက မနှစ်မြို့ကြဘူး။ သူတို့က တင်းကြပ်လှတဲ့ ကက်သလစ်တွေ မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော့်ကို ခရစ်ယာန်အယူဝါဒပေါ်ယုံကြည်ဖို့ ပျိုးထောင်ခဲ့တာကိုး။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းကို ပိုလေ့လာကြည့်လေ ကျွန်တော့်လူမျိုးကျွန်ပြုခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခရစ်ယာန်အယူကို ပိုပြီး စိတ်မချမ်းမြေ့လေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒုတိယမြောက်ဗာတီကန်ကောင်စီက ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ “ကျွန်ပြုခြင်းစနစ်ဟာ ဘုရားသခင်ကိုသိက္ခာချတဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ကြောင်း” ကြေငြာခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကြေငြာချက်က ကျွန်တော့်အတွက် မလုံလောက်သလို အခါလည်းနှောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျောင်းတော်ဝါဒ ကျဆုံးမှုဟာ ပြုပြင်တည့်မတ်မယ့်အစား အင်အားနဲ့သြဇာသုံးပြီး ကျွန်စနစ်ကို အဆုံးသတ်စေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ မွေးရာပါအပြစ်သား ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကလည်း ကျွန်တော့်အဖို့ မခံချိမခံသာဖြစ်စေခဲ့တယ်လေ။ ဆိုးသွမ်းတဲ့ သာသနာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ (ဥပမာ – Dum Diversas နဲ့ Romanus Pontifex )က ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကို ကျွန်ပြုဖို့၊ နယ်မြေ မတရားသိမ်းယူဖို့ အမြင်ဆိုးတွေသွတ်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
(အခြားသာသနာတစ်ခုကို)ကူးပြောင်းသက်ဝင်မှုဆိုတာ အန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ထောက်ခံကျားကန်ပေးမှုတွေကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ခရစ်ယာန်အများအပြားဟာ သူတို့ရဲ့ဘ၀၊ မိသားစုဝင်တွေကို ရင်းနှီးစွန့်စားလို့ ကျွန်စနစ်ကို ရင်ဆိုင်အံတုတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်ဘဲ အဲ့ဒီစနစ်အဆုံးသတ်ဖို့ ရှိမှာမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော် နားလည်သွားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိတရားနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ကြားခွနေဖို့ ခဲယဉ်းလှကြောင်း ကျွန်တော် သိမြင်သွားတယ်။ ဒီအချက်က သူတို့ အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို တိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်ရေးမှာ မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုးဝင်သွားစေခဲ့တာပါ။
အမည်သစ်နဲ့ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ခြင်းကလည်း ကျွန်တော့်အာခံမှုရဲ့ ထပ်ဆင့်လက်တံတစ်ရပ်ပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော့်မိသားစု၊ ကျွန်တော့်လူမျိုးစု ကျွန်ပြုခံရခြင်းနဲ့စပ်လျဉ်းသော ဘ၀အရေးအရာအပေါင်းကို အမြစ်လှန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘိုးဘေးတွေဟာ (လက်ရှိ) နိုင်ဂျီးရီးယားက ယိုရုဘာ Yoruba လူမျိုးနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ကျွန်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမည်နာမကို ခံယူထားခြင်းဟာ သူတို့အပေါ် မလေးစားရာ၊ သိက္ခာချရာ ရောက်စေသလိုဖြစ်တာမို့ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ခံထားရတယ်ဆိုပြီး ခံစားနေရပါတယ်။
အစ္စလာမ်ထဲကို ကျွန်တော် လုံးလုံးလျားလျား စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ် ၀င်ရောက်ခဲ့တာပါ။ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ် ခံစားချက်ပြင်းထန်နေလင့်ကစား ဟမ္မာ့စ် အကြံပြုတဲ့ အမျိုးသမီးကိုပင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ သဘောတူတဲ့အထိပါပဲ။ ကစားသမားကောင်းပီပီ နည်းပြ ဟမ္မာ့စ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း လိုက်နာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘများကို မင်္ဂလာပွဲ မဖိတ်ကြားဖို့ သူ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း ကျွန်တော် နာခံလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအမှားကို ပြန်တည့်မတ်နိုင်ဖို့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်တဲ့အထိ အချိန်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟမ္မာ့စ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအချို့အပေါ် ကျွန်တော် သံသယရှိသော်လည်း အတွေးထဲက ဖယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က အဲ့ဒီကာလများမှာ နာမ်ပိုင်းပြည့်ဝမှု တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ကြုံတွေ့ခံစားနေရလို့ပါပဲ။
သို့သော် ကျွန်တော့်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာနေတတ်တဲ့ စိတ်က နောက်ဆုံးတော့ လမ်းခွဲထွက်လိုက်တယ်။ လူတစ်ဦးတည်းဆီက ဘာသာရေးအသိပညာကို လက်ခံနေခြင်းအပေါ် တင်းတိမ်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ဟမ္မာ့စ်ရဲ့ ကုရ်အာန်သင်ကြားချက် အချို့ လက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ကြောင်း သိမြင်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ လမ်းခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ လစ်ဗျားနဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျကို ကျွန်တော် သွားတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့ ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ အရဗီစာပေကို ကောင်းစွာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဟဂ်ျပြုပြီးနောက် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်ချက်၊ သစ်လွင်သောအယူဝါဒနဲ့အတူ ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ကနေ ဒီကနေ့ထိ အစ္စလာမ်ကိုကူးပြောင်းသက်ဝင်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ မယိမ်းယိုင်တော့သလို နောင်တရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ပြန်လှန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ဟာ မြူဆွယ်မှုတွေ၊ သွေးထိုးခံရမှုတွေ အလျဉ်းမပါဝင်ဘဲ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ချီတက်လိုက်တဲ့အသွင် ဆောင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်ပြုမှုစနစ်နဲ့ အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျားကန်ပေးတဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆတွေအပေါ် ရှုတ်ချပြီး လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အသံထုတ်နေချိန် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်ရည်မျှော်မှန်းချက်တွေထက် ပိုပြီး နိုင်ငံရေးအရ နည်းလမ်းကျခဲ့တယ်လေ။
လူများစွာတို့ဟာ မွေးဖွားပြီးနောက် သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရားထဲ သွတ်သွင်းခံရတယ်။ အဲ့ဒါက သူတို့အဖို့ အစဉ်အလာအရ၊ သက်သာမှုအရ အလွန်အရေးပါနေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အယူဝါဒက သာသနာ့သွန်သင်မှုအတွင်းကမဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်မှုအပေါ်၊ ထိုနည်းလည်းကောင်း မိသားစုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် အခြေခံတာပါ။ ဘာသာကူးပြောင်းသူအဖို့ အဲ့ဒီအချက်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ဖို့၊ အာခံနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်က အယူဝါဒနဲ့အတွေးအခေါ် ပေါင်းစပ်ချက်အပေါ် အခြေပြုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့မိသားစု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေရဲ့ ထုံးတမ်းဓလေ့များကို စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ – ပြီးတော့ သူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်ရတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့ အလွန်အားကောင်းတဲ့ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု လိုအပ်လို့ပါဘဲ။ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ထောက်ခံကျားကန်မှုတွေကို ဆုံးရှုံးလက်လွှတ်သွားတတ်တာကြောင့် ဘာသာတရားကူးပြောင်းခြင်းဆိုတာ တကယ့်စွန့်စားခန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ပရိသတ်တွေက ကျွန်တော့်ကို လျူ လို့ခေါ်ဝေါ်ဆဲဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုခေါ်ရင် ကျွန်တော် ကရုမစိုက်တတ်တာကြောင့် သူတို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဟန်ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော့်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုအတွက် သူတို့ရဲ့မလေးစားမှုက စော်ကားခြင်းတစ်ရပ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူတို့နားမလည်ကြပါဘူး။ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးထက် သူတို့စိတ်ကြိုက်ဆင်ယင်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကို ခင်းကျင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို ရုပ်ပြသက်သက်လို သဘောထားတာမျိုးကြောင့် ဖြစ်နေရတာပါ။
ပြင်သစ်လူမျိုး ကားမစ် Kermit က “အမေရိကန်မှာ မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရတာဟာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူသလိုဘဲ” လို့ လူသိများအောင် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဓိကဘာသာတရားလူ့အုပ်စုများဆိုင်ရာအမြင်ကို စစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့ Pew Research Center အဆိုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အစ္စလာမ်က တတိယအကြီးဆုံးဘာသာတရား ဖြစ်နေပါလျက် အမေရိကန်လူထုက မွတ်စ်လင်မ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်မထားဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဘာသာမဲ့တွေပင်လျှင် သူတို့ထက် မဆိုစလောက်လေး အလေးအနက်ထားခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို မွတ်စ်လင်မ်လို့ကြွေးကြော်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု၊ လူမဆန်မှု၊ အဓမ္မဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေကြတဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကျန်သူများက ကျွန်တော်တို့ကို ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ ကမ္ဘာ့မွတ်စ်လင်မ်လူဦးရေ သန်း ၁၆၀၀ အနက် အများစုက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဘ၀တည်ဆောက်နေကြတာပါ။ ဒီအမှန်တရားကို မသိရှိပါဘဲလျက် သူတို့က အဆိုးဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဘဲ ရှုမြင်နေကြတယ်လေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ္စလာမ်ကူးပြောင်းခြင်းမှာ ကျွန်တော့်သာသနာအကြောင်း အခြားသူတွေကို သင်ကြားဖို့ တာဝန်ခံလိုက်ခြင်းလည်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ကူးပြောင်းအောင် ပြုလုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့အတူ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ကူညီမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအားဖြင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်ရေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးက ဘာသာတရားတစ်ခုတည်းသာ တည်ရှိနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ တကယ်အလိုအပ်ဆုံးကတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်ရှင်သန်ရေးဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းပါဗျာ။
ကိုယ်တိုင်ရေးဆောင်းပါးရှင် ကရီးမ် အဗ်ဒုလ် ဂျဗ္ဗာ့ရ် – Kareem Abdul-Jabbar သည် အမေရိကန်၏နာမည်ကြီး NBA – National Basketball Association ဘတ်စကက်ဘောအသင်း၏ အချိန်ပြည့်ဦးဆောင်ကစားသမားဖြစ်သည်။ သူပါဝင်ကစားသော ရာသီပွဲစဉ် ၂၀ အတွင်း အသင်းသည် ချန်ပီယံ ၆ ကြိမ်ဆွတ်ခူးပြီး သူသည်လည်း အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ၆ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
မူရင်း – Why I converted to Islam ; America . Al Jazeera
ဘာသာပြန် – သြရသ ရေချမ်း
Tags: famous muslim sports players, revert_to_islam